Toliara : tsy hangina, hisy diabe sy «festival» | NewsMada
Toliara : tsy hangina, hisy diabe sy «festival»
Raha mangina tanteraka ny kianja sy ny efitrano fampisehoana ary ny arabe eto an-dRenivohitra noho ny tsy fahazoana manao hetsika famoriam-bahoaka, tsy toy izany kosa ny any Toliara any. Azo lazaina fa vao mainka hafana ity renivohitra ity, amin’io faran’ny herinandro io.
Porofon’izany, fantatra fa hanamarika ny Andro eran-tany ho an’ny gidro ny any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Hisy ny hetsika hotontosaina mandritra izany, ny zoma izao. Hetsika inoana fa hahaliana ny maro ka anisan’izany ny « carnaval » na diabe. Handray anjara amin’io ny tarika mpively ampongabe, Bloco Malagasy.
Raikitra ihany koa ny « Vez’tival » andiany fahatelo, ny 28 oktobra hatramin’ny 3 novambra izao, mbola any amin’iny faritra iny hatrany. Anisan’ireo handray anjara amin’ny hetsika fanokafana izany ny Roda Malagasy, tarika mpanao « capoeira », izay eo ambany fiahian’ny fikambanana Bel Avenir.
Marihina fa « festival » iray hanomezan-danja sy hampahafantarana ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny fomba amam-panaon’ny foko vezo ny « Vez’tival ». Ankoatra ny seho an-tsehatra samihafa sy ny fampirantiana, mampiavaka ity hetsika ity ny fifaninanana mivoy lakana.